ပုံတစ်ပုံက ဖော်ပြတဲ့ သမိုင်း " The Vulture and The Starving Child " (M-Media Blog) - News @ M-Media
ပုံတစ်ပုံက ဖော်ပြတဲ့ သမိုင်း ” The Vulture and The Starving Child ” (M-Media Blog)
in M-Media Blog / ဘာသာပြန် / သုတ၊ရသ — June 5, 2013
စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာ ပုံတစ်ပုံပါပဲ … ။ ဒီပုံကို တစ်ခါမြင်ဖူးတာနဲ့ အမြဲတန်း မှတ်မိနေစေမယ့် ပုံတစ်ပုံပါ…။ ကျတော် ငယ်ငယ်တုန်းက တစ်ခါ တွေ့ခဲ့ဖူးပြီး အခုထိမှတ်မိနေသေးတဲ့ ပုံတစ်ပုံပါ… ။
ဒီပုံက နာမည်ကြီး ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပြီး တော်တော့်ကို ဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့ ပုံဖြစ်ပါတယ်… ။ ဒီပုံကို တောင်အာဖရိက ဓာတ်ပုံဆရာ Kevin Carter က 1993 ခုနှစ် ဆူဒန်နိုင်ငံ အငတ်ဘေးတုန်းက ရိုက်ခဲ့တာပါ… ။
1993 ခုနှစ် မတ်လ …. ဆူဒန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်… ။ ဓာတ်ပုံဆရာ Kevin Carter က ငတ်မွတ်နေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ( မိန်းကလေးပါ ) ကုလသမဂ္ဂ ရဲ့ အစားအစာပေးဝေရေးစခန်းကို တရွတ်တိုက် သွားနေတာကို ရိုက်ထားတာပါ…။ ဒီပုံကိုရဖို့ မိနစ် ၂၀ လောက်စောင့်လိုက်ရပါတယ်… ။ အကြောင်းက … ပုံထဲက လင်းတငှက် တောင်ပံဖြန့်တဲ့ အချိန်ကိုက် ရိုက်ချင်လို့ စောင့်နေတာပါ …။ ဒါပေမယ့် မရခဲ့တော့ ဒီအတိုင်း ရိုက်ခဲ့ရပြီး ငှက်ကိုတော့ ခြောက်လှန့် မောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်…. ။ ကလေးကိုတော့ ဘာမှ မလုပ်ပေးခဲ့ပဲ ဒီအတိုင်း ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်… ။ ကလေးရဲ့ မိဘတွေက UN က ဝေပေးနေတဲ့ စားနပ်ရိက္ခာတွေကို သွားယူနေကြတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် …. ။ ( Kevin Carter တို့ စီးလာတဲ့ လေယာဉ်က ဝေပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ) ။ သူဒီပုံ ရိုက်ပြီး ကလေးကို ဘာမှလုပ်မပေးခဲ့လို့ တော်တော် စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရပါတယ်.. ။ နောက်တစ်ပါတ် ဒီနေရာ ပြန်ရောက်တော့ ဒီကလေးကို ပြန် မတွေ့တော့ပါဘူး … ။
ဒီပုံကို New York Times သတင်းစာ ကိုရောင်းလိုက်ပြီးတော့ 1993 မတ်လ 26 ရက်နေ့မှာ ပထမဆုံး ပုံနှိပ်ဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ်…။ ညတွင်းချင်းမှာပဲ ရာပေါင်းများစွာသော လူတွေက သတင်းစာတိုက်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ဒီကလေး ဘာဖြစ်သွားခဲ့လဲ ? အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့လား ? ဆိုပြီး မေးခဲ့ကြပါတယ်…. ။
တစ်ကယ်တန်း ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာ ဓာတ်ပုံဆရာ Kevin Carter ကိုယ်တိုင်တောင်မှ မသိခဲ့ပါဘူး…။ ဒီပုံကို တစ်ခြား Magazine ၊ သတင်းစာတွေမှာ ဆင့်ပွားဖော်ပြခံခဲ့ရပြီး တော်တော်လေး ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ် …။ The St.Petersburg Times သတင်းစာ က ” ဒီလူက ကလေးရဲ့ ခံစားနေရမှုတွေကို လှစ်လျှုရှုပြီး သူ့ပုံကောင်းဖို့အတွက်ပဲ လုပ်နေခဲ့တာပါ … ။ ဒီပုံထဲမှာ မမြင်ရတဲ့ နောက်ထပ် အသားစားငှက်တစ်ကောင်က ဓာတ်ပုံဆရာပါပဲ…. ” လို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်…။
ဓာတ်ပုံဆရာ Kevin Carter နဲ့ အတူတူပါလာတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သတင်းထောက်တွေက ဒီလိုပြန်ပြောကြပါတယ်…. ။ သူတို့က ကုလသမဂ္ဂ ရဲ့ စားနပ်ရိက္ခာဖြန့်ဝေရေး အစီအစဉ် အရ ဆူဒန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းက Ayod ဆိုတဲ့နေရာကို 1993 ခု မတ်လက ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်…။ သူတို့စီးလာတဲ့ လေယာဉ်က မိနစ် 30 အတွင်း ပြန်ထွက်မယ်လို့ UN တာဝန်ရှိသူတွေက သူတို့ကို အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်… ။ ဒါနဲ့ သူတို့ ဓာတ်ပုံ အမြန်ထွက်ရိုက်ကြပါတယ် … ။ သူတို့စီးလာတဲ့ လေယာဉ်က အစားအစာတွေကို စတင်ဖြန့်ဝေပေးတဲ့အခါ ရွာထဲက အမျိုးသမီးတွေတွေ သူတို့ တဲထဲက ထွက်လာကြပြီး အစားအစာတွေကို သွားယူကြပါတယ်… ။ ကလေးတွေကိုလည်း ပစ်ထားခဲ့ကြပါတယ်… ။ Kevin Carter က ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီး တော်တော် စိတ်ပျက်အံ့သြနေတာပါ… ။ ဒီအငတ်ဘေးကို သတင်းလိုက်ယူတာလည်း သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး အကြိမ်ပါ… ။
အဲဒီမှာ Kevin Carter က ပုံထဲက ကလေးမ ကို တွေ့သွားတာပါ….။ ကလေးရဲ့ အနားမှာလည်း လင်းတငှက်တစ်ကောင် ရှိနေခဲ့ပါတယ်… ။ သူ့ရဲ့ ပုံထဲမှာ ကလေးရော လင်းတငှက်ပါ ပါလာစေဖို့အတွက် သတိကြီးစွာထားပြီး သွားခဲ့ပါတယ်… ( ငှက်က လန့်ပြီး ပျံသွားမှာ စိုးလို့ပါ ) …။ ကလေးနဲ့ 10 မီတာ အကွာကနေ ပုံကို ရိုက်ခဲ့တာပါ… ။ ပုံအနည်းငယ်ရိုက်ပြီးတော့ သူက လင်းတငှက်ကို မောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ် …… ” လို့ ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်… ။
Kevin Carter ရဲ့ သူငယ်ချင်း နောက်တစ်ယောက်ကလည်း ဒီလိုပြန်ပြောပါတယ်… ” သူက ဒီပုံကို ရိုက်ပြီးနောက် သစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာ ထိုင်ပြီး ဆေးလိပ်တွေ ထိုင်ဖွာနေခဲ့ပါတယ်…။ သူမြင်ခဲ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းကို မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်နေပုံပါ…. ”
1994 ခုနှစ် မေလ မှာ ဒီပုံနဲ့ ” ပူလစ်ဇာ ” ဆုရခဲ့ပါတယ်….။ ဒါပေမယ့် သူမပျော်ရွှင်ခဲ့ပါဘူး…။ ” ကျတော် ဒီကလေးကို ဘာမှလုပ်မပေးခဲ့တဲ့အတွက် အရမ်းကို စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်…။ ကျတော်မြင်ခဲ့ရတာတွေ ၊ ဒီကလေးလေး ဘာတွေဆက်ဖြစ်ခဲ့လည်းဆိုတာတွေက ကျတော့်ကို အမြဲတန်း ခြောက်လှန့်နေခဲ့ပါတယ်…. ” လို့ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်…။
ဆုရပြီး ၃လအကြာ 1994 ခုနှစ် ဂျုလိုင်လ 27 ရက်နေ့မှာ ဓာတ်ပုံဆရာ Kevin Carter က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေသွားခဲ့ပါတယ်…။ အဲဒီ့အချိန်မှာ သူက အသက် ၃၃ နှစ်ပဲရှိသေးတာပါ..။
( ဝေဖန်မှုတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ လူတော်တော်များများ မသိတဲ့အကြောင်း တစ်ခုရှိပါတယ်…။ ကူးစက်ရောဂါတွေ မပြန့်ပွားအောင် ဆူဒန်နိုင်ငံက အငတ်ဘေး ဒုက္ခသည်တွေကို မထိမကိုင်ရဘူးလို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ဂျာနယ်လစ်တွေကို မှာထားတာဖြစ်ပါတယ်…။ )
” The Photo solely belong to respective Photographer Kevin Carter ”
Tags: AungWinHtut, M-Media_Blog